काठमाडौँमा घर बनाउने वा जग्गा किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ? हो भने यो पढ्नुहोस -
काठमाडौँमा घर बनाउने वा जग्गा किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ? हो भने यो पढ्नुहोस
काठमाडौँ महानगरपालिकाले भवन इजाजतसम्वन्धी सेवाग्राहीको सूचना मोबाइल सन्देश (एसएमएस)बाटै दिन थालेको छ । सेवालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी वनाउन उक्त सेवा शुरु गरिएको कामपाका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । काफ्लेले भन्नुभयो, “यो सुविधा विद्युतीय सेवाबाट नक्सा पास गरेका नागरिकले मात्र पाउनेछन्, कामपाले करिब दुई वर्षदेखि विद्युतीय नक्सा पास गर्न शुरु गरेको छ ।”
प्रयोगकर्ताले काठमाडौँ डट जिओभी डट एनपी मा क्लिक गरी नक्सा दर्ता गर्दा प्राप्त भएको रजिस्ट्रेसन नम्बर राखेपछि आफ्नो फाइल कुन टेबलमा पुगेको छ, यसबाट कुन टेबलमा कति समय अड्कियो ? नक्सा पास हुने प्रणालीमा अब कतिवटा टेबलमा पुग्न बाँकी छ, घरमै बसेर हेर्न सकिन्छ ।
Previous स्मार्ट बुहारी ,सासुको प्रिय बन्न चाहनुहुन्छ ? यी १० टिप्स अपनाउनुस
Next विश्वका ५ महाकन्जुस् अरबपति: जसका अनौठा किस्सा सुनेर पर्नु हुनेछ तपाई आश्चर्यचकित !